အယ်ဖိုး: စမ်းသုံးချင်သူများအတွက် Windows 8 Developer Preview version
စမ်းသုံးချင်သူများအတွက် Windows 8 Developer Preview version
ဒါကတော့ စမ်းသုံးကြည့်တဲ့ သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ. preview version အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ် မပြီးသေးပါဘူး. ဒီ OS ကတော့ tauch screen ကို ဦးစားပေး ထုတ်ထားတာလို့ သိရပါတယ်. Driver တွေ ပိုစုံလာပါတယ်. တစ်ချို့ဟာလေးတွေ ဒီဇိုင်းပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်. myanmar font ပါလာတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်. animation ကတော့ အလုပ် လုပ်တယ် မလုပ်ဖူးဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး. window7မှာတော့ animation ပုံတွေ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး. တစ်ခုဆိုးတာက anti virus program တွေထဲက Avast နဲ့ Kaspersky Internet Security 2012 တော့ အဆင်မပြေဘူးလို့ သိရပါတယ်. ကျွန်တော်တော့ မသုံးသေးပါဘူး. တရားဝင် ထုတ်တော့မှပဲ တင်ပြီးသုံးတော့မယ်. ဦးဦးဖျားဖျား စမ်းသုံးချင်တဲ့သူတွေ ရှိရင် သုံးရအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. iso နဲ့ ရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်. DVD နဲ့ အခွေ burn ပြီးတော့ တင်ရုံပါပဲ.